Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 24/05/2019
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 24/05/2019
(နေပြည်တော်၊ ၂၄-၅-၂၀၁၉ ရက်)Union Minister Lt-Gen Ye Aung and Union Minister U Thein Swe receive UNHCR Chief separately
Naypyitaw May 23
Union Minister Lt-Gen Ye Aung and Union Minister U Thein Swe received Mr. Filippo Grandi, UNHCR at their ministries separately in Nay Pyi Taw on 23 May 2019.
During the meeting with Union Minister Lt-Gen Ye Aung , they openly discussed about implementation of suggestions of advisory commission on Rakhine state, livelihoods of IDPs, implementation of repatriation and resettlement for displaced persons, the ministry’s work on closing of IDPs in Myebon and teaming up with other ministry in closing the rest of the IDP camps.
During the meeting with Union Minister U Thein Swe, the two sides cordially discussed the ministry’s efforts for ensuring reaching true information to those residing at the neighbouring country, and efforts for creating peaceful coexistence between the two communities in Rakhine State, efforts for closing the Internally Displaced Person (IDP) camps in Kachin State and Rakhine State, and aid from UN and INGOs for dignified return of displaced persons.
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီးအား သီးခြားစီ လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေတို့သည် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာမင်းကြီး Mr. Filippo Grandi အား မေလ ၂၃ ရက်တွင် သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင်နှင့် မဟာမင်းကြီးတို့ တွေ့ဆုံစဉ် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေးကော်မရှင်၏ အကြံပြုတင်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ နိုင်ငံတော်အစိုးရမှ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးနေမှု၊ လတ်တလော တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူများအတွက် စားဝတ်နေရေး ထောက်ပံ့ကူညီပေးရေးကိစ္စ၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာ သွားသူများ ပြန်လည်လက်ခံရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာကိစ္စ၊ တောင်ပေါ် IDPs စခန်း (မြေပုံမြို့နယ်) ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးအတွက် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၏ လက်ရှိဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ကျန် IDPs စခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေးအတွက် အခြားဝန်ကြီးဌာနများနှင့် ပူးပေါင်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်သွားမည့် အခြေအနေများကို ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေနှင့် မဟာမင်းကြီးတို့ တွေ့ဆုံရာတွင် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအနေဖြင့် မှန်ကန်သော သတင်းအချက်အလက်များ ရရှိစေရေး၊ နှစ်ဖက် လူ့အဖွဲ့အစည်းအချင်းချင်း ရေရှည်သဟဇာတ ဖြစ်စေရေးအတွက် ညှိနှိုင်းကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေမှု၊ ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ IDP စခန်းများအား အဆင့်ဆင့် ပိတ်သိမ်းနိုင်ရေးနှင့် ၎င်းတို့ နေရပ်ဒေသများသို့ ပြန်လည်နေရာချထားနိုင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေမှု၊ ယင်းလုပ်ငန်းစဉ်များအရ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာသူများအနေဖြင့် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိ၊ ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ ပြန်လည်ဝင်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် ကုလသမဂ္ဂ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း အသီးသီးက ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး အခြေအနေများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရပါသည်။